Linn IT Mart
Call Us : 09-789799799
Kenbo K6 3G (1/8GB) White
Kenbo K6 တွင် Screen size 5.45 ရှိပြီး Display 960 x 480 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ RAM 1GB နဲ့ ROM 8GB ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး Battery mAh အနေဖြင့် 2200 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ Main Camera 5MP ရှိပြီး Selfile Camera 2MP ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။
Kenbo K6 3G (1/8GB) Gold
Network GSM/ HSPA
Display Size 5.45 inch
Memory 1GB RAM, 8GB Storage
Device Security No
Available Color White, Gold
Kenbo K9 Pro (2/16GB)
KENBO K9Pro တွင် Screen Size 5.99 inch ရှိပြီး Resolution အပိုင်းကိုတော့ 1280*720 HD ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ RAM 2GB နဲ့ ROM 16GB ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး Battery mAh အနေဖြင့် 3000 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ Main Camera 8MP ရှိပြီး Selfile Camera 5MP ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။
Kenbo B19 (2/32GB)
Kenbo B19 တွင် Screen size 6.09 ရှိပြီး Display 1560 x 720 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ RAM 2GB နဲ့ ROM 32GB ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး Battery mAh အနေဖြင့် 4000 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ Main Camera 13MP/ 2MP Camera (၂)လုံးနဲ့ Selfile Camera ကို 5MP အသုံးပြုပေးထားပါသည်။
Kenbo E121 (1/8GB)
Kenbo E121 တွင် Screen size 5.5 ရှိပြီး Display 1280 x 720 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ RAM 1GB နဲ့ ROM 8GB ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး Battery mAh အနေဖြင့် 2500 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ Main Camera နဲ့ Selfile Camera ကို 5MP အတူတူ အသုံးပြုပေးထားပါသည်။
Kenbo O71 (3/32GB)
KENBO O71 တွင် Screen Size 6.09 inch ရှိပြီး Display 1280 x 600 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ RAM 3GB နဲ့ ROM 32GB ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး Battery mAh အနေဖြင့် 3050 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ Main Camera 13MP ရှိပြီး Selfile Camera 8MP ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။
No. 14/585, 4th Street, Paung Laung Quarter, Pyinmana.
Copyright © 2020 Linn Online Store. All Rights Reserved.